Filtrer les éléments par date : mardi, 29 octobre 2019
mardi, 29 octobre 2019 22:05
Tana Masoandro: Mangataka hihaona amin’ny Filoham-pirenena ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa
Tonga tetsy amin’ny lapan’Anosikely androany ny solotenan’ny vahoaka avy amin’ireo Kaominina voakasika amin’ny tetikasa Tana Masoandro, nihaona tamin’ireo Loholona, ho tohin’ny fankan-kevitra efa nataon’ireo Loholona teny Ambohitrimanjaka ny alatsinainy 21 oktobra 2019.
Mangataka ny hihaona mivantana amin’ny Filoham-pirenena izy ireo, satria tsy ahitambaha-olana ny fihaonana tamin’ireo solotena izay nalefan’ny Fiadidiana ny Repoblika, sy ny taratasy izay nalefan’ny mponina amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Nangataka ireto loholona ireto ny solontenan’ny mponina mba hitady ny vahaolana sy hitondra ny feon’izy ireo any amin’ny Filoham-pirenena.
mardi, 29 octobre 2019 21:40
Solika: Tonga eto Toamasina ny sambo MT/ MR AQUARIUS mitondra gazoala 36,6 tapitrisa litatra
Ny tolakandron’ity talata 29 oktobra 2019 ity no niantsona eto amin’ny seranantsambon’i Toamasina ny sambo mpitatitra solika MT/ MR AQUARIUS, izay mitondra gazoala 36,6 tapitrisa litatra. Hisy sambo hafa ho avy amin’ny 15 novambra 2019.
Ny alahady 27 oktobra dia lasantsy 600 000 litatra sy gasoil 2 300 000 litatra no niala teto Toamasina namatsiana ireo toby fitehirizan-tsolika any Antananarivo sy ny faritra.
mardi, 29 octobre 2019 21:28
RN33A: Nanavotra olona naratra ny miaramilan’ny ZRPS DELTA Tsaratanana
Fihetsika mahatehidera no nasehon’ny ZRPS DELTA Tsaratanana omaly, nanavotra lehilahy iray naratra vaky loha vokatry ny fianjerana. Tsy nisalasala ny avy ao amin'ny Tafika nandray sy nitondra ity maratra ity, izay sendra azy ireo teny an-dalana, nandritra ny fisafoana tamin’ny lalana RN33A mampitohy an'i Tsaratanàna amin'ny sampanan-dalana Ambondromamy, ka nitondra azy ho tsaboina any Ambondromamy.
Izao hoy ny mponina no tena andrasana amin'ny Tafibahoaka, hanampy sy hiaro azy amin'ny sarotra.
mardi, 29 octobre 2019 21:27
Atsimo Andrefana: Manjeky tsy fandriampahalemana
Mitaraina ny mpandeha fa atahorana izay tsy izy ny miala an'i Sakaraha hariva miazo an’i Toliara, sy miala an'Andranovory hariva mankaty Toliara. Misy mitifitra sy mitorabato eny an-dalana manaraka ny lalam-pirenena faha-7.
mardi, 29 octobre 2019 14:37
29 octobre: Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux.
mardi, 29 octobre 2019 07:02
Fikorontanan’ny fitsinjarana solika: Nosazian’ny Fanjakana ny orinasa LPSA, Total ary Vivo
Sazy ara-bola mitentina 120 tapitrisa Ariary ho an’ny orinasa Logistique Pétrolière SA (LPSA), ary 60 tapitrisa Ariary isanisany ny an’ny orinasa Total ary Vivo (Shell). Nivoitra ireo ny alatsinainy 28 oktobra nandritra ny tafa tamin’ny mpanao gazety nataon’ny minisitry ny angovo sy ny rano ary ny akoran’afo Andriamanga Vonjy, sy ny avy amin’ny OMH (Office Malgache des Hydrocarbures) teny Ampandrianomby-Antananarivo.
Ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny solika ireo no nahatonga ireny fikorontanana tamin’ny famatsiana solika tamin'ny herinandro ireny ka nahatonga ny Ministeran'ny Angovo nandray ny fepetra, araka ny fanazavan’ny minisitra.